नेपालको मूल लक्ष्य कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने हो : सांसद अधिकारी - समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले नेपालले कालापानी क्षेत्रमा नागरिक शासन कायम गर्नका लागि भारतीय सेना फिर्ता पठाउनु अहिलेको मूल लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा अधिकारीले भने, 'अहिलेको नेपालको मूल लक्ष्य भनेको कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काएर नेपालको नागरिक शासन कायम गर्ने हो ।'
सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि भारतीय सेना फर्किएर उक्त क्षेत्रमा आएका बेला पनि त्यहाँका जनताले नेपालमा तिरो तिरेका प्रमाण रहेको बताउँदै अधिकारीले त्यतिबेला राजा आन्तरिक कलहमा परेकाले बोल्न नसकेको अधिकारीको भनाइ थियो । लिखित रूपमा भारतलाई उक्त भूमि कसैले नदिएकाले नेपालको स्वामित्वमा रहेको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले भोगचलन गर्न नदिएको उनको भनाइ थियो । 'जुन बेलामा भारतीय फौज त्यता आएर बसेको छ त्यो बेला राजाले संसद विघटन गरेका थिए । नेता जेलमा थिए । त्यतिबेला राजा आन्तरिक झन्झटमा भएकाले बाह्य झन्झटमा फस्न चाहेनन् । त्यो बेला राजाले अडान लिन नसकेका हुन् तर कुनै पनि लिखतबाट त्यो तिम्रो भनेका छैनन् । यो कुराले गर्दाखेरि नेपालको कालापानीमा भारतको स्वामित्व कायम हुन्न । नक्सा भारतले बनाए पनि हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं,' अधिकारीले भने ।
नेपाल-भारतको सीमा निर्धारण गर्ने सन्धि 'सुगौली सन्धी' मात्रै भएकाले महाकाली पूर्वको भूभाग नेपाल र पश्चिम भारतको भएको अधिकारीको भनाइ थियो ।
अहिलेको अवस्थामा केही प्रश्न उठेका अधिकारीको भनाइ थियो । उनले भने, 'के नक्सा संसदबाट पारित गर्न आवश्यक थियो ?, के संसदबाट पारित भएपछि वार्ताको गुन्जायस रहन्छ ?, के वार्ताको वातावरण हाम्रो तर्फबाट बिग्रिएको वा बिगारिएको हो ?, के अनायास, अपर्झट आजको निर्णयमा पुगिएको हो ?, के हामी वस्तुगत आधारभन्दा बढी संवेदनशील भएका छौं ?, नक्सा जारी हुँदैमा भौतिक भोगाधिकार कायम हुन्छ ?'
यी प्रश्नको जवाफमा अधिकारीले नै भने- 'नक्सा जारी गरेर नेपालले भारतसँग वार्ताको टेबुलमा बराबरीको हैसियत कायम गर्ने देखिएको छ ।' भारतले संसदबाट पारित भएको नक्सा देखाउँदा अब नेपालले पनि संसदबाट पारित नक्सा वार्ताको टेबुलमा राख्ने र समानता कायम हुने उनको तर्क थियो । भारतले नेपालका वार्ताका प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएकाले अहिलको अवस्था आएको उनको निष्कर्ष थियो ।
सांसद अधिकारीले वार्तामा जानका लागि नेपालको तर्फबाट बोलीमा संमयमता अपनाउन गरुरी रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘बोलीमा किन तिक्तता ल्याउने ? यो आवश्यक छैन् । अस‌ंयमित भाषामा टिप्पणी गर्नु नेपालको स्वभाव पनि होइन र यो विवादलाई अब स्थानीयकरण गरौँ । बाँकी अरु कुराहरूमा नेपाल भारतको मित्रतालाई अगाडि बढाउने हो ।’ कालापानी क्षेत्रकै कारण नेपाल-भारतको सम्बन्ध बिग्रिन नहुने अधिकारीको भनाइ थियो ।
प्रकाशित : असार ४, २०७७ १२:५२
रौतहटमा ३ वर्षअघि राखिएको बम फेला पर्‍यो
असार ४, २०७७ शिव पुरी
रौतहट — चन्द्रपुर नगरपालिका–५ स्थित राधाकृष्ण मन्दिर परिसरमा बिहीबार बम फेला परेको छ । मन्दिरको कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्ने क्रममा मजदुरले बम फेला पारेका हुन् । त्यस क्षेत्रलाई इलाका प्रहरीले घेरेर राखेको छ । तीन वर्षअघि चुनावी सभालाई लक्षित गर्दै चन्द समूहले राखेको बम बिस्फोट हुँदा ८ जना घाइते भएका थिए । सोही बेला राखेको बम अहिले फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
२०७४ मसिर १ गते तत्कालीन एमालेको चुनावी सभालाई लक्षित गरी चन्द समूहले मन्दिर परिसरमा टाइम बम राखेको थियो । उक्त बम बिस्फोट हुँदा स्थानीय सरिता राई र उनका ७ वर्षीय छोरा गम्भीर घाइते भएका थिए । बिस्फोटमा राईलगायत ८ जना घाइते भएका थिए । सोही बेला राखेको अर्को बम भने बिस्फोट नभएको प्रहरीको अनुमान छ । संसदीय चुनावका बेला एमालेले वडास्तरको सभाको आयोजना गरेको थियो ।
घटनाको तीन वर्षपछि बिहीबार मन्दिरको कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्ने क्रममा खाडल बनाउँदा बम फेला पारेको हो । इलाकाका डीएसपी हेमबहादुर शाहीले बम फेला पारेको पुष्टि गरे । ‘अहिले त्यस इलाकालाई घेराबन्दी गरेर राखेका छौ,’उनले भने, ‘डिस्पोजका लागि सेनालाई खबर गरिसकेका छौं।’ बमको चारैतिर तार ब्याट्रि फिट गरिएको छ । टाइमसहित थुप्रै बम राखिएको अनुमान छ । केही बिस्फोट भए पनि एउटा त्यतिकै जमिन मुनि छाडिएको प्रहरीले जनायो । बम फेला पारेको स्थानमा चन्द्रपुर सरकारी अस्पताल पनि पर्छ । अहिले बम हेर्न अस्पताल आएकाहरुको भीड लागेको छ ।
प्रकाशित : असार ४, २०७७ १२:२०